Fihaonana ho an'ireo manam-pahaizana momba ny SUSE any Barcelona | Avy amin'ny Linux
Ny ankamaroan'ny mpamaky FromLinux dia Espaniola ary eto amin'ity firenena ity dia misy hetsika lehibe tokoa manodidina ny rindrambaiko maimaimpoana (indraindray mitsiriritra ny fahasalamana aho), io dia mivadika ho fahafaha-manao hetsika marobe hatao manodidina ny loharano misokatra ary koa ny fifanakalozana sy fanomezana ho an'ny maro hafa. Amin'ity taona ity i Barcelona dia hanana ny hafaliana amin'ny maha mpampiantrano ny fivoriana ho an'ny manam-pahaizana momba ny SUSE (ny andron'ny manam-pahaizana momba ny SUSE), izay iarahan'ny mpampiasa sy ny manam-pahaizana avy amin'ity vondrom-piarahamonina tena tsara ity mifanakalo hevitra, mampiseho ny fandrosoana ary mandalina ny toetoetry ny rafi-tontolo iainana malalaka.
Ny hetsika dia hatao ao amin'ny World Trade Center any Barcelona East Febroary 22 ary hanisy lahateny sy fampisehoana teknika, dia ho toy ny anao izy ioivon-tambajotra lehibe manodidina an'i SUSE ary amin'ny maha-toerana hanandraman'ny orinasa haneho an'izao tontolo izao ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana ary koa fomba iray hanitarana ny varotra varotra serivisy, hiteraka mpiara-dia vaovao ary hanamafisana ny fandrosoana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina voalaza.
Mandritra io andro io, ny orinasa dia hanolotra ny vaovao farany amin'ity taona 2018 ity amin'ireo matihanina katalana ao amin'ny sehatry ny informatika avy amin'ny manampahaizana manokana amin'ny SUSE. Ho fanampin'izany, ny orinasa dia hanolotra ny fomba fiasa 'Open open, open source', izay anampiany manampy ny mpanjifa sy ny mpiara-miombon'antoka hanova ny orinasan'izy ireo amin'ny alàlan'ny teknolojia loharanom-baovao misokatra, hamorona orinasa mailaka kokoa noho ny vahaolana vaovao amin'ny fitehirizana sy manavao amin'ny alàlan'ny fotodrafitrasa voafaritra lozisialy misokatra farany. Mandritra ity hetsika ity dia afaka mandray anjara amin'ny resadresaka teknika amin'ireo matihanina hafa ao amin'ny sehatr'izy ireo ny mpanatrika, ary koa mizara fahalalana ary mamorona fifandraisana vaovao ao anatin'ny vondrom-piarahamonina misokatra.
Etsy ankilany, ny namana avy any Espana dia ho afaka mankafy ny SUSE Expert Days 2018 amin'ity 22 martsa ity any Madrid (Kinépolis - Pozuelo de Alarcón) sy any Valencia (Paterna) mandritra ny volana Mey ho avy izao.
Izay liana hanatrika ireo hetsika rehetra ireo dia afaka misoratra anarana eto. Avy amin'ity tribonaly manetriketrika ity ny fanasana hizara amin'ny vondrom-piarahamonina lehibe an'ny OpenSuse, izay noresahintsika matetika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Fihaonana ho an'ireo manam-pahaizana momba ny SUSE any Barcelona